NYI LYNN SECK 18+ DEN: Bomb blasts infront of X2O Mandap, Kantawgyi
Posted by NLS at 4/15/2010 04:21:00 PM
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာတော့ သွေးအလုံအလောက် ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ သွေးလှူပေးမယ့် ကြက်ခြေနီတွေလည်း ရှိနေမှာပါ။
အကယ်လို့များ သွေးတွေ လိုအပ်နေသေးရင် RAVEN Blood Donor Club ကို ဆက်သွယ်ခိုင်းလိုက်ပါ။
Destiny Cun said...
So Sad to hear that .. Why Always US between They & Them
ဆုိုးပါ့ဗျာ.. ဒီလို သင်္ကြန်ရက်ကြီးမှာတောင်မှ.. သင်္ကြန်ကို အကျည်းတန်အောင်လုပ်တာ လွန်ပါတယ်.. သင်္ကြန်မှတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့.. people are innocent :(
စိတ်မကောင်း စရာ သတင်းပါဗျာ..
ဒီလိုလုပ်တာ ကို ရှုံချပါတယ်
မကောင်းဘူး ဘယ်သူ လုပ်လုပ်မကောင်းဘူး
ဒါ သင်္ကြန်ကွ လူယုတ်မာတွေရဲ. လုပ်ရပ်ဘဲ ...
လုပ်ချင်ရင် လုပ်ချင်တဲ့သူကို တိုက်ရိုက်လုပ် အထူးသဖြင့် မြန်မာမှန်ရင် ပျော်တက်မြတ်နိုးတဲ့ သင်္ကြန်တွင်းမှာမလုပ်သင့်ဘူး။ တကယ်လုပ်ချင်တဲ့သူကို တိုက်ရိုက်မြန်မြန်လုပ်ပါ။ အပြစ်မယ့်သူတွေကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူး။
ဘာလဲကွာ မိုက်ရိုင်းလိုက်ကျဒါ လူမဆံတဲကောင်တွေဘဲ ပြည်သူတွေ ကို လုဎ် ရက် တယ် ကွာ
ဗုံးတွေကလည်း ကွဲသင့်တဲ့နေရာမကွဲဘဲ မကွဲသင့်တဲ့နေရာဘဲ ကွဲနေကြတာ
very ugly!!! during myanma new year water festival,, now thingyan is bloody. what is to be done? our people are innocent.
သင်္ကြန်တောင်မှ လွတ်၂လပ်၂နဲ့ မပျော်နိုင်ရှာကြရပါလား...
ဘယ်သူတွေ ဖောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို မြန်မာ့ရိုးရာ
သင်္ကြန်ပွဲတော်အခါကြီးရက်ကြီးမှာ မလုပ်သင့်ဘူး ထင်တာပဲ။ ဘယ်လို အငြိုးတွေထားထား ဒီလိုရက်မှာတော့ စိတ်ထားသန့်ရှင်းစွာ နေသင့်တာပေါ့။
လုပ်တဲ့သူ တော်၂လွန်တယ်။ လူမဆန်လိုက်တာ... အပြစ်မဲ့သူတွေ ခံလိုက်ရတာ သနားစရာ။
MYANMAR BORN said...
IF REALLY NEED TO SUFFER. SURE THEY ARE OUR COUNTRY PEOPLE. IF THEY ARE OFFERED, THEY ARE THEIR RELATIVES. OH SHITTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!! HOW PITIFUL OF OUR INNOCENT PEOPLE!!! Huhhhhhhhhhhh! WHEN CAN WE ESCAPE FROM THIS TERRIBLE SITUATION? STAYING IN COUNTRY, JUNTA BULLIES US. STAY IN OTHER COUNTRIES, THE HOME-LORD BULLY US. OH MY BUDDHA! HOW TERRIBLE OF BEING MYANMAR PEOPLE! WOhhhhhhhhhhhhhhhhhh. MAY GET OUR PEOPLE IN PIECE IN NO TIME!!!!!! :'(
That isabad new.so i really sad for innocent people.whose are really kill that people?
ကိုယ်ချင်းလည်းစာတယ်.. တို့တွေပျော်နေချိန်မှာ ဆုံးပါးသွားတဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့သူတွေရဲ့ မိသားစုရဲ့ ခံစားချက်ကို မြင်နေရတယ် .. မလုပ်သင့်တာ .. သိပေးကြပါဗျာ ..... :'(
ဘာပြောလဲ ( To ZIN <<<<<<<<<<<<<)
You shouldn't say like this. Not Even us, she is the one who is well-known by all over the world, named Aunty Su also still trying for our people gettingalots of sufferings. So far nothing much changed. Anyway, Why not we could be the one who does something for our people as much as u could? okie?
ကြက်ပြေးက မအေပေးတွေ အိမ်မှာ ပေါက်ရမှာ ။ ထွီ ...
သောက် သတ္တိ တစ်စက်လေးမှ မရှိတဲ့ကောင်တွေ ။ မြို့တော်ဝန်ထိုင်ခုံနားမှာ သွားဖောက်ပါလားကွ။ မဆီမဆိုင် တွေ့ကရာ လွယ်တဲ့နေရာ ဖောက်တယ် ။ ငါ့သာ ပေးလိုက်ပါလား အဲဒီဗုံး ၃ လုံး ။ ရေထမ်းေ၇ာင်းပလိုက်မယ်။ မှတ်ကရော့ လဟယ် ။
နောင်ဆိုရင် သင်္ကြန် ဆိုတာ ရာဇဝင်ထဲက ဒဏ္ဍာရီ အဖြစ်နဲ့ ကျန်နေခဲ့မယ် ထင်တယ်။
ဒီလို ဖြစ်ရပ်တွေကို ရှုံချပါတယ်။
I think it might not terrorist attack. What I think is the youngster may not ease with each other and the one who has weapon might did this stupid things. Who hasachance to get these kinds of weapon? It is from very few sources especially in Yangon. I don't think police forces may have enough privileges to find out who really did this.
There is no justification for bombing in there. Whether it was done by SPDC or other elements,I strongly condemn this brutal assault on innocent civilians during Burmese New Year Water Festival.
ကြည့်လေ ကွန်မန့် ပေးတဲ့ လူတိုင်းဝမ်းနည်းတယ်. . သူတို့မိသားစုဆိုရင်ကော .. ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
ဘယ်လိုအကောင်စားကပဲ လုပ်လုပ် ကန့်ကွက်တယ်။ တရားခံကို ပေါ်အောင် ဖော်ထုတ်ပြီး တားဆီးနိုင်ပါစေ။
ဗုံးပေါက်ပါတယ်ဆိုမှ ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေေ၇ာ ကြက်ပြေးတွေရော ပါနေရတာလဲ ဗုံးပေါက်တာသေမှာပေါ့ ဘယ်မှာကွဲကွဲ လူရှိရင်တော့ သေကျမှာပဲ ဘယ်နေရာမှလဲ မကွဲစေချင်ဘူး ဘယ်သူမှလဲ မသေစေချင်ပါဘူး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာပဲ နေတိုင်ချင်ပါတယ်....
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖောက် ပြီးရင်သောင်းကျန်းသူတွေကို လက်ညှိုးထိုး ။
> zin please do not comment like this. Your comment is too harsh to people....
ဘာကောင်တွေလဲကွ နောက်တစ်ခါဆို မင်းတို့ ဖောက်တဲ့ ဗုံးက မင်းတို့ လက်ထဲမှာကွဲမှာကွ .. တော်တော် ယုတ်မာတဲ့ အကောင်တွေ...း(
တကယ်ဘဲ ဗျာ .. ကြားကြားချင်းစိတ်တောင် မကောင်းဘူး မလုပ်သင့်ပါဘူး .. ၀ဋ် ဆိုတာ အမြန်ဆုံးပြန်လည်မှာဘဲ ... လုပ်ချင် ရင် လည်း လုပ်သင့်တဲ့လူကို သွားလုပ်ပါလား ဗျာ .. အပြစ်မရှိတဲ့ ပြည်သူကိုလုပ်တာကတော့ ယုတ်ကန်းလွန်းပါတယ်ဗျာ .. အထူးသဖြင့် သင်္ကြန်လိုနေ့မျိုးမှာ ဗျာ ... တင်း တယ် ဗျာ .....
ခွေးမသားတွေ လုပ်ချင်ရင် နေပြည်တော်မှာသွားပြီး ဗုံးမိုးရွာ ပစ်လိုက်ပါလား..ဘာလို့ yg ပျော်စရာ သင်္ကြန်မှာ လုပ်ရတာလဲကွာ..မင်းတို့ သေချင်ပြီ ထင်တယ်..တွေ့မယ် ငါနဲ့ :(
သူပုန် က ဒီလောက် ဦးနှောက် နဲ ရလား ကွာ ၊
စဉ်းစား ကြ ပါ လို့။
ရက်စက်လိုက်တာ။ နှစ်ကူးကြီး လုပ်ရက်တယ်။
ခွေးကောင်တွေ.. မင်းတို့ သတ္တိရှိရင် နေပြည်တော်မှာ သွားဖောက်ပါလားကွ.. !! ဒီမှာ အပြစ်မရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ ပဲရှိတယ်... မင်းတို့ အဖေတွေ နေတာမဟုတ်ဘူး.. မင်းတို့ ဖောက်စရာလဲမဟုတ်ဘူး....စောက်ရေးမပါတာ..
မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားသတင်းကတော့ ... ယောကျာင်္း ၃ယောက်။ မိန်းမ ၃ယောက် သေဆုံး ။။။ ၇၅ဦး ဒါဏ်ရာရဟု ကြေညာသွားပါတယ် ... တကယ် အကျီးတန်တဲ့လုပ်ရပ်ပါ ... လူစိတ်ကင်းမဲ့လွန်းပါတယ်
ဒီလုပ်ရက်ဟာကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်မဟုတ်သလို ပြည်သူတွေအတွက်လဲအရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ် ဒီကိစ္စကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ မလုပ်သင့်ပါဘူး
မဆိုင်သူတွေမထိသင့်ဘူးလေ၊နောက် အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်လုပ်ရင်လဲ တစ်ခြားနေရာတစ်ခြား နေ့တွေ လုပ်သင့်တယ်...ဘယ်သူတွေဘာဘဲလုပ်လုပ်
လုပ် သူလိုလိုငါလိုလိုအချိန်ကုန်ခဲ့လိုပြည်သူတွေလဲနောက်ကျကျန်ခဲ့ပါပြီ ဗီယက်နမ်လိုအရင်က ကိုယ့်ထက်မွဲတဲ့နိုင်ငံတောင်ကျော်သွားပြီးဆိုတာကို နှစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေမမေ့ကြပါနြ့မှိန်းမနေကြပါနဲ့ လို့ကိုညီလင်းဆက်ဘလော့ကနေဘဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်..ဒဏ်ရာရပြည်သူများ ကျန်းမာကြပါစေ
this looks and smells likeaMI Junta backed operation to gain sympathy on the masses .. and stain the Image of the democratic groups ..
ဘယ်သူပဲ လုပ်လုပ် လုပ်တဲ့ သူကို အပြင်းအထန် ရှုံ့ချပါတယ် ...
အခုလုပ်ရက်ကတော့ အရမ်းယုတ်မာလွန်းပါတယ်။ သင်္ကြန်ဆိုတာ လူငယ်တွေအများဆုံးပျော်တဲ့ပွဲပါ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ လုပ်တဲ့သူက တော်တော် ဥာဏ်မရှိလို့ပါပဲ။ သတ္တိရှိရင် နေပြည်တော်မှာသွားလုပ်ပါလား။ အသေခံဗုံးခွဲလိုက်လေ
ပြည်သူကို သတ်တာ သူတို့ ပဲရှိတယ်။
ဗုံးပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ်စ သေချာသွားပြီလား၊ တခြားပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား၊ ဥပမာ ကားဂက်စ်အိုးပေါက်တာ၊ ဖြစ်တာက ဘယ်မှာလဲ မန်တပ်ဘေးမှာလား၊ ကားပေါ်မှာလား၊ သိတဲ့သူမျာပြောကြပါအုံး၊
တကယ်ဗုံးပေါက်တာမှန်ရင်တော့အစိုးရလက်ချက်ဆိုတာလည်းထဲ့စဉ်းစားရမယ်၊ သူတို့ ကနေပြည်တော်မှာ စည်စေချင်တာလေ
lee pae hayyyyyyyyyyy
X20 ga bal thu load te` mandat lel??
owner net shock shi net to tal...
we don't know yet who really behind this hideous crime.The SPDC does not haveagood track record on bombing in Rangoon either but it's hard to pinpoint who did it.I feel very sad and sorry to hear this news. I hated and hope the guys who did this hideous crime burn alive in hell!!!
we are so sad for hearing this bad news
အခုလေးတင် ငရဲမင်းဆီက forward mail ၀င်လာတယ်။ ငရဲပြည်မှာ မကောင်းသူတွေအတွက် position ထပ်နေလို့ မရက်စက်ကြပါနဲ့တော့တဲ့။ ငရဲကလာသူက ပြာပူမကြောက်ပေမဲ့ ငရဲပြည်မှာ ချဲ့စရာ မြို့ကွက်လဲကုန်မေပြီမို့ ရပ်ကြပါရန်တဲ့
ဘယ်ကသူပုန်ရမှာလဲဗျာ... စစ်အစိုးရခွေးမသားတွေရဲ့ လက်ချက်ဘဲနေမှာ.... သူပုန်မှန်ရင် နေပြည်တော်မှာ သွားဖေါက်နေပြီး...သူပုန်ကစင်စားဥာဏ်ရှိတယ်...
သတ်ပေးကြပါ ဗုံးဖောက်တဲ့လူကို စောက်သဲယားတယ် သတ်ချင်လာပီ ခွေးလောက်တောင် ဇောက်မနက်တဲ့သတ၀ါမျိုးတွေ ထမင်းမစားပဲချီးစားနေတဲ့ကောင်တွေ
မင်းတုိ့ကြောင့် ငါ့ကောင်မလေးသေသွားရင် ငါလုံးဝ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး .... -ီးတဲ့မှ ... မင်းတို့ ရက်စက်လွန်းတယ်ကွာ .... မင်းတို့ သိပ်ရက်စက်လွန်းပါတယ် .....................
Ba Ba Nay Pyi Daw said...
ပေါက်စရာရှားလို့ဗျာ...ဗုံးကလဲ CH-V ကျတော့သွားမပေါက်ဘူး...
အဲ့မှာ မသာတွေရဲ့ သားသမီးတွေကြီးပဲ
Everybody know who is bomber. Nobody take any weapon. So, thinks yourself! Very Ugly For our festival.
ဘယ်ကောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ခွေးလောက်တောင် အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ ကောင်တွေ၊ ရှုံ့ချတယ်ဗျာ...။
Saw Tin Maung said...
Who can buy Bomb in Myanmar?
Who can bring Bomb in Myanmar?
Who know how to use Bomb in Myanmar?
Who doesn't like Yangon?
Who want to crowded NayPyiDaw?
what the hell serious going on in myanar !!
ဘယ်သူပဲဖောက်ဖောက် အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်။ နှစ်ကူးမှာ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ ဓားစားခံ ဖြစ်ရတာ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ တကယ့်ကို ၀မ်းနည်းပါတယ်
သူတို့ မွေးထားတဲ့သားသမီးတွေလဲ ဒါမျိုးတွေ အကုန်ကိုင်နိုင်တာပဲ.... သူတို့ချင်းပြန်ချတာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲ.... မိမသိ ဖမသိ နှစ်သစ်ကူးမသိ ဘရား မသိတွေလေ... နာမည်ကြီးတွေ...
လင်းယံယံလင်း ခင်ဗျားမို့လို့ အဲဒီ စကားမျိုး ပြောရက်တယ်...လုပ်ချင်တဲ့ သူက နေရာမရွေး အချိန်မရွေး လုပ်မှာဘဲ...ဒီအချိန်မှာ ရန်ကုန်မှ မဟုတ်ဘူး လုပ်လိုရရင် ရသလို လုပ်မှာဘဲ...လူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့ နေရာမှာ ဒီလို ကိစ မဖြစ်ဘူး..နောက်ဆုံး နာကျင် ခံစားရတာက ပြည်သူတွေပါ...ဒီလိုလုပ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တယ်ဆိုရင်တော့ အင်မတန်အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရပ်ပါလို့....စိတ်မကောင်းစွာဖြင့်
ပုံမုန်မဟုတ်တဲ့နေရာပြောင်းရွှေ့မှုတွေလုပ်ပြီဆိုကတည်းက တခုခုဖြစ်တော့မယ်လို့ ထင်တယ်..
ဒီလောက် ရက်ရက်စက်စက်ကြီးတော့ တွေးမထားမိတာ အမှန်ပဲ....
သင်္ကြန်ဆိုတာ ဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန်မှာ ပျောက်သွားတော့မယ်...
...ဒိုအရေး..ဒိုအေ၇း..အဲ ရောင်လို....ဟုတ်ပါတယ်...ဟုတ်ပါတယ်..ထောက်ခံတယ်..ထောက်ခံတယ်...ထောက်ခံတယ်...ထောက်ခံတယ်..ဟုတ်ပါတယ်...ဟုတ်ပါတယ် ...
This is the outcome of when Burmese people ignoring the politics of Burma as if it has nothing to do with the rest of the country. Let's just look back to what exactly happened in past 20 years. People have been ignoring the act of this ugly government and letting them to do whatever they want to the country. Now, the country is helpless. People are unorganized. No-one is willing to take the lead. These are the signs which show that the time has come for the entire nation to stop sitting back and relax. If people of Burma dun act, it is gonnabsecond Iraq.
Gtoo Milo said...
မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ ကောင်တွေ ... ပြည်သူလူထု တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါ ပျော်နေကြတာကို .. လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို လုပ်ရဲကြတယ် ...။ သိပ်သတ္တိရှိနေရင် .. မင်းတို့ အဘအိမ်တွေမှာ သွားဖောက်ကြပါလား ... :\_
aye zay moe myint said...
ကိုညီလင်းဆက်ရေ ... နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်န့ နိုင်ငံခြားမှာ
တောင်းစားနေရတဲ့ လူတွေသာ ဒီသတင်းကိုကြားသွားခဲ့
ရင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ လေးယောက်ကနေ အပြစ်မဲ့ပြည်သူ
p.s တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေရတဲ့အစိုးရက ဗုံးဖောက်ပြီး ဘာလုပ်မှာလည်း။ သင်္ကြန်မကျစေချင်
ဘူးဆိုရင် ဗုံးဖောက်စရာမလိုပါဘူး .. မဏပ်ပါမစ်တွေ မချပေးနဲ့ဆိုတဲ့ အမိန့်တစ်ခုပဲလိုတယ်
အခု ကျွန်တော်သိချင်တာက ဘယ်သူလုပ်လဲဆိုတာထက် ဘယ်သူတွေ comment ပေးနေလဲကိုပါပဲ။ Post တွေက နည်းနည်း politics ဆန်နေတယ်။ ကျွန်တော်.အမြင်ပြောရရင် ပုံမှန်လူတယောက်ရဲ. တုံ.ပြန်မှုက ဗုံးထိတဲ. လူတွေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာက ပိုအရေးကြီးသင်.တယ်ထင်တာပါပဲ။ ဒုတိယကတော. ရှုံ.ချတာပေါ.။ လေကြွယ်တိုင်း ရှောက်မပြောကြပါနဲ.။ အခုပြောသင်.တာက သင်သူတို.တွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲကိုပါ။ အချိန်တန်ရင် အဖြေမှန်တော. ပေါ်လာမှာပါ။
Why are they wasting their money to buy people's sadness?
Thingyan isafestival!
They shouldn't do this kind of stupid thing just to hurt people.
And can they be happy when people are sad?
I am waiting for the day that they are arrested!
I just can't believe it guys...I mean what's the point in doing this. Who's gonna gain what from that violent action? Does those ones who did this know these innocent people are taking the consequences. The whole town is now in catastrophe. Now, asaresult, the rest(last) day of our Myanmar New Year Festival would bealot look like...(sad)...likeadessert. No one could get out and wander freely in such insecure atmosphere. Would you? I don't want to ( In fact, I can't ) point out who did this, but whoever did this let me tell you this. " Please, go find someone else of your own size. What do you eat for your lunch you idiots? Can't you see it's us who're suffering??? There's no point in doing this. Nothing's gonna change. Last word you evil kinds...last word." Next time when you plan to do this...you first realize the tears on your mother face. :'(
အပြစ်မဲ့ပြည်သူထိခိုက်စေတာ သောင်းကျန်းသူတွေလုပ်ရပ်ပဲ ပြစ်မှတ်မရှိပဲ လုပ်ရပ်မျိုး လုံးဝလက်မခံပါ
သေချာတာကတော့ ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဖြစ်စဉ် ကြီး တစ်ခုရှိလိမ့်မယ် ။ မဟာဗျူဟာချတဲ့သူကတော့ တကယ်ညံ့ ပါတယ် ။ အင်မတန်မှလည်း ရက်စက်ပါတယ် ။ လူစိတ်ရှိပုံလည်းမရပါဘူး။ ဘယ်လို အကျိုးမျိုးကိုလိုလို ဒီလို မဟာဗျူဟာမျိုးတော့ မချမှတ်သင့်ပါဘူး ။ ရှေ့ရှောက်ဒီ့ထက် ဆိုးတာတွေ ကြုံရဖို့ရှိနိုင်တာကိုလည်း သတိထားရမယ် ။ လူတိုင်းကတော့ အရမ်းကို စိတ်တိုကြမှာပေါ့ တရားခံ ဟာ တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့ထဲ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ အလျှော့မပေးနိုင်ကြတဲ့ အတိုက်အခံကော အစိုးရကော နှစ်ဘက်စလုံးကို တရားခံ အဖြစ်မှတ်ယူရပါမယ် ။ တိုင်းပြည် နဲ့လူမျိုးကောင်းစားစေချင်ရင် လုပ်သင့်တာ တစ်နည်းပဲ ရှိပါတယ် ။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး လတ်တလော ကောင်းစားရေး ၊ ရေရှည်ကောင်းစားရေးနဲ့ အရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးတို့ပါပဲ ။ နည်းမှန် လမ်းမှန် လူမှန် နဲ့ ခပ်သွက်သွက်လေးချီတက်ရင် နောက်မကျသေးပါဘူး ။ နောင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ မကြုံချင်ရင် တော့ .....
နေပြည်တော်ကို စည်ကားလာအောင်ဆိုပြီး ရန်ကုန်ကို အကျည်းတန်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလား??
ဒါမှမဟုတ် တမင်သက်သက်အဲလိုထင်အောင်လို့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကပဲ အကွက်ဆင်ပီးလုပ်တာလား...တွေးရတော့ခက်သား...ဘယ်သူပဲလုပ်လုပ်၊ လုပ်တဲ့လူလည်းတနေ့ဝဌ်လည်မှာပဲ...
i am so said for this news . pray for people died ....
ဘယ်သူပဲလုပ်လုပ်.. ဒီလုပ်ရပ်ကတော့ ရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်ဗျာ.. အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သက်သက်မဲ့ခံရတာတော့မကောင်းပါဘူး...
နေပြည်တော် မစည်လို့လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ဆုတောင်းတာပဲ :((
မင်းပထွေးနေပြည်တော်သွားလုပ်လို့ကတော့ ၁သက်၁ကျွန်း ထောင်နန်းစံသွားရမှာပေါ့ကွ။ ဦးနောက်မရှိဘူးလား။ နက်ဖြန်လည်းထပ်ဖောက်စမ်းပါ။ တစ်မြို့လုံးပြာကျသွားအောင်သာလုပ်ပြစ်။ ညှာမနေနဲ့ ။ ဒီနေ့ ကနည်းသေးတယ်။ လုပ်သာ လုပ်ကြဟေး
ကဲကဲ .. comment ရေးတဲ့လူတွေ တစ်ယောက်ကို တစ်သောင်းလောက်စုပြီး ခံလိုက်ရတဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ပေးကြမယ်လေ။
ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တယ် .. လျှောက်ပြောမနေကြနဲ့
အဲ့ဒီ့တော့ အဖြေက who?
သက်ြန်ရက်မှာ မြန်လိုက်တဲ့ရဲတွေ. အဆင်သင့်များစောင့်နေတယ်လို့ထင်ရတယ် ..:P သနားပါတယ်ဗျာ.....
Lote Chin Yin Lae` direct Twar lote bar lar ha
pye thu tway nar tae`
ကိုညီလင်းဆက် block ကိုခုမှစ၀င်ကြည့်ဖြစ်တာပါ.. သတင်းတွေစုံသလိုမြန်လဲမြန်တာကြောင့်သူတို့ဖုံးထားပေမယ့် အမှန်ကိုသိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်မဖြစ်ပေမယ့်လဲ ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစု တွေအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်.. လုပ်တဲ့သူတွေကလဲသူ များတွေကုသိုလ်လိုချင်လို့တောင်တကူးတကအခါကြီးရက် ကြီးမှာနေထိုင်ကြရတာ.. သူတို့များကျတော့နော်.. မိုက်ရိုင်းလိုက်ကြတာ
တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်ကို ရိုးစွပ်တဲ့ စကားတွေ
ခွေးမသားတွေ မင်းတို့ အာဏာလုနေကျရင်းနဲ့
အပြစ်မဲ့တဲ့ သူတွေကတော့ သေကုန်ပြီ
သတ္တိရှိကျရင် စိမ်ခေါ်ပြီး ချကြပါလား ငါလိုးမသားတွေ
အပြစ်မဲ့တဲ့ သူတွေကို ဘာလို့ ဒုက္ခပေးကြတာလဲ
Thanks for your updated news and photos, am not in my country and worried for the people there as MM is our homeland.Very sad for the lives of innocent people.Their families will get my prayers.Strongly condemn the cowards who hold the responsibility of murdering innocent people even in New Year eve. The cheerful Water festival and New Year are very meaningful for all Myanmar people(all ethnic groups,all tribe, poor/ rich, Christian, Buddhists, Muslim, Hindu, and all religions,from youngster to elderly ones),we all could have grasped cheerful and peaceful moment during thingyan days when we can put all unwanted feelings asideawhile.
Do respect those who offer to donate blood to the injured people!As in lieu of blaming by mouth in vain, they have done what needed to do!
People are Innocent....... :(
ကရင်နှစ်ကူးမှာ ဗုံးဖေါက်တယ်။ အခု မြန်မာနှစ်ကူးမှာ ဗုံးပေါက်တယ်။ ပြီးရင် ဘာတွေထွက်အော်အုန်းမလဲ။ ဒါမျိုးတွေ ရိုး..ဟိုး..ဟိုး နေပြီ။
Do respect these following persons who have lent their hands when in need.
"ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာတော့ သွေးအလုံအလောက် ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ သွေးလှူပေးမယ့် ကြက်ခြေနီတွေလည်း ရှိနေမှာပါ။
ဒီဘလော့က သင်္ကြန် ပုံတွေကြည့်ပြီးပျော်မယ်ကြံကာရှိသေး ဗုံးကထပေါက်လို့ အိမ်ပြင်တောင်မထွက်ဝင့်ပါလား :(
လိုအပ်တဲ့ အကူအညီလိုရင်ပြောဗျာ အဆင့်သင့်ပါဘဲ
တနှစ်မှ တခါ အတာသင်္ကြန်မှာ ရေကစားကျတာ
မနက်ပိုင်းကတောင် ကားနဲ့လည်ရင်း အဲ့ မဏ္ဍပ်ရှေ့ပိုင်း ရောက်ခဲ့သေးတယ်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတွေ ထိခိုက်တာတော့ မကောင်းဘူးဗျာ
အမှန်ဆို ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့လူကို တိုက်ရိုက်လုပ်ဗျာ
မဆိုင်တဲ့သူတွေ ထိတာ စိတ်မကောင်းဘူး
ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော သင်္ကြန်မှာ အရက်သောက်ပြီးလျှောက်လည်မယ် လျှောက်အော်မယ်
ဆော်နဲ့ကဲမယ် အဲဒါတွေမဖြစ်သင့်တော့ဘူး မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းတခြားစီပဲ
အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ အရက်ကုမဏီကြီးတွေကတော့ တအားကျေးဇူးတင်မှာပဲ
နေပြည်တော် မှာပဲ စည်ကားစေချင်ရင်လည်း တခြားနည်းနဲ့ လုပ်လို့ရတာပဲ။ မဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ ထင်တဲ့ သင်္ကြန်တောင် အလွတ်မပေးပါလား။ ပြည်သူတွေမှာ ဘာအပျော်မှ မရှိစေချင်တာလား။ ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချပါတယ်။ မြန်မာတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့ပွဲတော်ကို ကမ္ဘာ့ အလည်မှာ ပါ အရှက်ကွဲစေချင်တာလား။ ပြည်သူတွေ မှာ ဘာ အပြစ်ရှိလို့လဲ။ အပြစ်တွေ က နေပြည်တော်မှာ စုနေ တာ အားလုံးအသိပါ။
ဒါ ဟာ သိပ် ပြီး ရက် စက် လွန် တယ် ။ မ ဟုတ် မှ လွဲ ရော ဒါ န.အ.ဖ ရဲ့ နိုင် ငံ ရေး လှည်း ကွက် တ ခု ဖြစ် နိုင် တယ် ။ ဒီ လို ရက် စက် မှု တွေ့လုပ် တတ် တာ န. အ. ဖ ပဲ။
I would like to addalittle bit on it..who tried to bomb and kill Gen.Tin Oo ( former S-2) several times when he was alive in Rangoon until he died in the helicopter crashed in the jungle.
This regime will bring some people to confess and make press conference then saying that KNU, and others to be blamed for this hideous crime.it smells like Rat,this is definitely done by spdc secret service to get Sympathy for upcoming their the Fake Elections.
ဗုံးဆိုတာ ပုလင်းလေးတစ်လုံး စာအုပ်လေတစ်အုပ် စာအိပ်လေးတစ်အိပ် ရှိယုံနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေကို တို့ပြည်သူတွေမသိပေမယ့် ပြည်ပြေးတွေ သောင်းကျန်းသူတွေကတော့သိတယ်ကွ အေးဒါတွေကို တို့လိုစစ်ပညာသင်ထားတဲ့သူတွေကတော့သိတာပေါ့ သာမန်ပြည်သူကတော့ဘယ်သိမလဲ အစိုးရက ကိုယ့်ပြည်သူကိုနစ်နာအောင်လုပ်မလားကွ မင်းတို့ ပြည်ပမှာနေပြီး ပြည်သူတွေကို ဆူပူအောင်လုပ်ချင်မနေကြပါနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေကြပါစေ ကျွန်တော့ မိဘ ဆွေမျိုးတွေလည်း ရန်ကုန်မှာရှိပါတယ် ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်း လုပ်မှာမဟုတ်သလို ဥပဒေဘောင်မှာနေတဲ့သူဆို ဘယ်သူမှလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး အားလုံးနဲ့ထပ်တူ ၀မ်းနည်းရပါတယ် ဆုံးပါသွားတဲ့သူများ ကောင်းရာသုဂတိလားပြီး ဒါဏ်ရာရနေသူများ အမြန်သက်သာပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အားလုံးပါပဲ.....
just now getanews message...50 people die now.... still injury 300 people r in hospital
A safe place or safe Capital"??Is Government involve in this blast??Is nay pyi daw gonna getaTag of Safe Place from today...What about the Former capital, ygn...why they stop providing security to the former capital????alot questions need to be answered...
If the bomb blaster were not G, then why he or they didn't bomb blast water stages from Inya???
စောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေ...။ သတ္တိရှိရင် ဘာလို့ဒီလိုသင်္ကြန်မှာ လာလုပ်နေရတာလဲ...။ မစားရတဲ့ အမဲ..သဲနဲ့ ပက်တဲ့ကောင်တွေ...။ fuck you....
Why? For what? Worth to kill innocent people? Any party who did this just think abit...
ကျနော်က ခုမှရေးတဲ့ Anonymous ပါ... အရင်ရေးနေတဲ့ တယောက်မဟုတ်ပါ...
အခု ဗုံးကွဲတာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်နေတဲ့သူတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာ... ဥပမာ...... တွေပေါ့ဗျာ...
comment ပေးတဲ့ လူတွေကို ### ပဲ
အပြစ်မဲ့ တဲ့ပြည်သူတွေ အတွက် တကယ်ကို
မင်းတို့တွေ နောက်ဘ၀ လူမပြောနဲ့
ခွေးဝဲစား ဖြစ်ရင်တောင် ကံကောင်းပီမှတ်
ငါကတော့ သေတောင် ဥဒါန်းမကျေ ဖူး
ဒါပေမယ့် အခုလို အကြမ်းဖက်၊ လူသတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့လူတွေမှာသာ အပြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီလူတွေကို နောက်ကွယ် ကနေ အသွင်အမျိုးမျိုးယူပြီးကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်း အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ မြင်ဖို့ လိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတိုးတက်တာကို မြင်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်၊ အင်္ဂလိပ်စတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ပါမယ်လို့ကြွေးကျော်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လို စီအာရ်ပီပီလိုအဖွဲ့တွေဟာ ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ထောင်ကျ နေတဲ့ သူတို့တပည့်တွေ နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်တာတောင် ကြေညာချက်တွေ အမျိုးမျိုးထုတ်နေပေမယ့် ဗုံးဖောက်ခွဲမှုတွေကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်း တစ်ခွန်းပြောဖော်မရဘူး။ လက်ပူးလက်ကြပ်အထောက်အထားနဲ့ ဖမ်းမိတဲ့သူတွေ၊ ဒီလူတွေရဲ့ သက်သေထွက်ချက်အရ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ပါတယ်လို့ ဖော်ထုတ်ရရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ရှုံ့ချ တယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပြောဖို့သတိမရကြဘူး။ နယ်စပ်ကရတဲ့ တစ်ဖက်သတ်သတင်းတွေကို အခြေခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း မကောင်းသတင်းတွေကို အစီရင်ခံနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂက ဘန်ကီမွန်းလို ကွင်တာနားလိုလူတွေက ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှု တွေကို လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှုအဖြစ် ပြောဖို့မေ့နေကြတယ်။
ဒီလိုရှုံ့ချဖို့မေ့နေရုံ၊ ပျက်ကွက်နေရုံသာမကဘဲ အဲဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်း တွေအဖြစ်ပုံ ဖော်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုပါ အားရပါးရလုပ်နေတာကိုပါ တွေ့ကြမှာပါ။ အိုဘားမားအစိုးရကဆို နယ်စပ်က ဒီမို ကရေစီလှုပ်ရှားသူများ အတွက် ဒေါ်လာ ၃၆ သန်းကျော်ပေးမယ်တောင် ကတိပြုထားသေးတယ်။ ဒီလိုပဲ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ NED ခေါ်တဲ့ National Endowment for Democracy ကလည်း နယ်စပ်က ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့လို့နံမည်ခံထားတဲ့အဖွဲ့တွေကို နှစ်စဉ် ဒေါ်လာသုံးသန်းကျော်ပေးနေခဲ့တယ်။ ဒီလိုပဲ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ သြစတေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တွေအောက်မှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကလည်း နယ်စပ်မှာ လူသားချင်းစာနာမှုအတွက်ဆိုပြီး ဒေါ်လာသန်းချီပြီးပေးနေတာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကို ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်အထိခေါ်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေတောင်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။
ဒါ့ကြောင့် အခု သင်္ကြန်ကာလမှာ ကျခဲ့တဲ့ အပြစ်မဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ သွေးတွေဟာ အကြမ်းဖက်လူသတ်သမားတွေ ရဲ့လက်မှာ သာစွန်းနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကို အမျိုးမျိုးသောအကူအညီတွေပေးနေတဲ့ အနောက် အုပ်စုနဲ့ ပြည်တွင်းက ပုဆိန်ရိုးတွေရဲ့လက်မှာလည်း အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သွေးတွေစွန်းနေပြီလို့ ပြောလိုပါတယ်။ ဒီသွေးကြွေးဟာ ကမ္ဘာကြေသော်လည်း ဥဒါန်းမကြေဘူး၊ ဒီအတွက် အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေရော၊ နောက်ကွယ်က အားပေး ကူညီသူတွေရော ပေးဆပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာ သတိပေး ချင်ပါတယ်။
သတ္တိရှိတယ်လို့ ထင်တဲ့ကောင်တွေ...။ အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေကို ဘာလို့ ထိခိုက်အောင် လုပ်တာလဲကွ...။ မင်းတို့ မှာ မင်းမိုက်စရိုက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလား....။ သင်္ကြန်ကွ..။ မြန်မာတွေရဲ့ ထုံးစံတွေဆိုတာကော မင်းတို့ စိတ်ထဲမှာ ရှိသေးရဲ့ လား...။
AT dar bal thu load lae so taught bitch of san ^than shwe^.lee pae
than shwe yay. nagr lo ma thar. ko may ko lo.fuck dog gyi.phay lo ma thar gyi.nin kaw thin gya mhar ma pyaw bu bu lar
bar lo at lo load ya tar lae
nindlo load tar5la pine mhar lar mae election kaung ma lar
dog kg kee yat...nin do thway thay yin ba waasat sat pyan thay ya par say lo ngar su taung tal
ma aye lo yat
nin do bar saught thone kha tar shi lo lae
people tway c ka u tal
p yin poeple ko pyan that tal
dog taung hta min khway lat ko ma kite bu
nin do ko dog nat pyaw tar dog lack dignified tal
thi yat lar
ngar tight ma sae tat bu
dar pin mat nin do lo myo ma sit kg tway awart taught ayan sae tat tal mhat htar
သူဟာသူ ဗုံးပေါက်တာ နအဖ ကိုများလွဲချသေးတယ် စောက်သူတောင်းစားတွေ မသိရင်လျောက်မပြောကြနဲ့ ကွာ
ကျွန်တော် ဒံပေါက်စားနေတုန်းဗျ ဒံပေါက်စားတယ်ဆိုထဲက ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လောက်နီးမယ်ဆိုတာတွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်
တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ "ရဲတွေရောက်လာတာမြန်တယ်" လို့ရေးထားပါတယ်။ တကယ်မြန်ပါသလား?? တကယ်မြန်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်သံသယ ရှိဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီလောက်လူတွေ၊ ကားတွေပိတ်နေတဲ့ အချိန်မှာဘယ်ရဲကမှ အဆင်သင့်မစောင့်နေရင် ဒီလောက်မြန်မြန်ရောက်မယ်ထင်ပါသလား??
All I can say That's fuck up for sure!!! what kind of peoples do that !! I mean i know country had been going bad situation but u can't kill peoples who are innocent!! God Help us!!! Please!!!
Oscar Troy said...
ဒေါသထွက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်၊ ခံပျင်းဖို့လည်းကောင်းတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင် လက်ရှိတက်နေတဲ့အစိုးရနဲ့သူ့အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်း
လက်ရှိ SPDC ကလုပ်သလိုလို၊ အတိုက်အခံသောင်းကျန်းသူတွေကလုပ်သလိုလိုနဲ့
လုပ်လုပ် ၂ ဖက်လုံးကိုလီးပဲကွာ။ အာဏာရူး နဲ့
အရမ်းကို ရိုင်းစိုင်းကြတယ်ကွာ တော်တော် လူမဆန်တာပဲ
နောက်ဆုံးရရှိသောသတင်းအရ သေးဆုံးသူ (၃၀) ဦးဖြစ်ပြီ ဖောက်ခွဲသော အဖွဲ့အစည်းမှာ NCUM ( www.ncum.info) ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စောက်သူတောင်းစား ခွေးမသာ စစ်အစိုးရကိုများ ဗုံးခွဲတယ်ပြောနေတယ် မင်းကဘာသိလို့ လဲ မသိရင်ရမ်းမပြောနဲ့ ခွေးမသားတွေ
မေလိုး စစ်အစိုးရတွေ...။ လီးလို့သင်္ကြန်မှာ ဗုံးလာခွဲတာလား...။
သတင်းနဲ့ဓါတ်ပုံတွေ ဦးဦးဖျားဖျားတင်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ။
ဓါးစားခံဖြစ်ကြရတဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူ သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။
နောက်ပြီး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ချိန်နဲ့ သတင်းတက်ချိန် က ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း သဲလွန်စကို ရှာချိန် မပါလောက်အောင် မြန်နေ သလားလို့... ဒီနေရာ ဒီအချိန်မှာ ဗုံးဖောက် မယ်လို့ ကြိုသိထားလို့ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ချက်ချင်း သတင်း ထုတ်နိုင်သလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်နော်။
မဏ္ဍပ်အောက်မှာ မီးစက်တို့ လောင်စာဆီတို့ မထားမိဘူးလား အပူရှိန် တအားများလို့ heat တက်ပြီး ဖြစ်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ဗုံးဆိုတာ သေချာလို့လား။ သင်္ကြန်ဆိုတာ အရှိန်အ၀ါ ကြီးလွန်းတော့ ဘယ်သူမှ ဗုံးမဖောက်လောက်ဘူး ထင်တယ်နော်... မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လုပ်တာကိုယ်ခံရမှာပဲ ၀ဍ်ကြွေးဆိုတာ အခုခေတ်မှာ မြန်ဆန်ပါတယ် တော်တော်အောက်တန်းကျပြီး မိသားစုချင်းမစာနာတဲ့ လုပ်ရပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ သူ ဘုရားရိုက်တာခံရမယ် သူများခိုင်းလို့ လုပ်ရလဲ အဲဒီခိုင်းတဲ့ သူပါ အပြစ်ပိုခံရမယ် မှတ် သူငယ်ချင်းတို့၇ ရက်သားသမီးတွေအားလုံးသင်္ကြန်မှာ ဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းယုံကလွဲပြီးငါတို့ ပြည်သူတွေက ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဟာ ၀မ်းနည်းစွာ နဲ့ 
ကိုညီလင်းဆက် အခုလိုတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ... ဒါပေမယ့် အကိုလည်းနည်းနည်းသတိထားနေပါဦး... ဘာလို့လဲဆိုတာ အကိုမြန်မာဆိုတော့ သိမှာပါ... စိတ်မကောင်းလိုက်တာ အခုလိုသတင်းကြားရလို့ပါ.. အကိုလည်း ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျာ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Is itastrategy to make Nay pyi daw "A safe place or safe Capital"??Is Government involve in this blast??Is nay pyi daw gonna getaTag of Safe Place from today...What about the Former capital, ygn...why they stop providing security to the former capital????alot questions need to be answered...
If the bomb blaster were not Government, then why he or they didn't bomb blast water stages from Inya???
tha nar par tal , thingyan so tot ka lay tway myer mher .. kalay tway kadachain lay pel pyaw ya tar.. within 15 to 25 mherdloaphyit soe tway kyone ya laut taeahtiapyit kyee nay kyablar .... thingyan so tar gyi ma pyaut kwel twer par say net.da phyit soe gyi htae mher hti khite khan ya tae luu tway wut kyway shi khae yin leldbawa mher kyay naing kya par say ...
ဆဲတယ့်ကောင် မင်းမိုက်ရိုင်းလှချည်လား စစ်အစိုးရကိုမနာလိုတိုင်းလျောက်ပြောမနေနဲ့မသိပဲတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း လက်ရှိအစိုးရကိုပဲတိုက်ခိုက်မနေကြနဲ့ ကွ မင်းလို စောက်အဆင့်မ၇ှိတဲ့ ကောင်ကကောဘယ်လောက်တောင်သိနေလို့ လဲ
မြေးမျောက်လောင်လေး ရန်ကုန်မှာကဲပြီး နေပြည်တော်အပြန် ရန်ကုန် သင်္ကြန် လူမစည်အောင် အကြံပိုင်တဲ့ ချုပ်ချုပ်ကြီး လက်ချက်...
ပြည်သူတွေမှာ ဗုံးရှိရင် စစ်အစိုးရ နဲ့ သူ့လက်ပါးစေတွေကိုပဲ လုပ်မှာ ... ပြည်သူတွေကို့ မုန်းနေတာ.. စစ်ခွေးအစိုးရ..
i'm away from myanmar now.I'm too sad for this bad news.I'll never thought like this happens in our new year festival that is not terroits.So,could be who?must be fucking Government and fucker major general.
anti-Bone Man said...
ဟိုအကောင်တွေလုပ်တာပဲနေမှာ သူတို့ကလွဲလို့ ဘယ်သူမှမရှိဘူး
ဘယ်သူတွေရှိရမှာလဲ နေပြည်တော်က ချီးစားနေတဲ့ခွေးတွေလေ
p.s ဆ တ အကောင တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေရတဲ့အစိုးရက ဗုံးဖောက်ပြီး ဘာလုပ်မှာလည်း။ သင်္ကြန်မကျစေချင်
ခွေးမသား.အစိုးရ က မင်း မအေပေးတွေ တွေ လားက .ပြည်သူကို သတ်တာ သူတို့ ပဲရှိတယ်။... နေပြည်တော် ခွေးကောင်တေ ကြက်ပြေးက မအေပေးတွေ အိမ်မှာ ပေါက်ရမှာ
and some idiots are still covering up for them here... stupid idiots...
ဘာဖြစ်လို့ ဗုံးတွေ လူတကာချဉ်တဲ့ န.အ.ဖ ဆီမှာ မပေါက်ပဲ ပြည်သူတွေဆီမှာ ပေါက်တာလဲ စဉ်စားစရာ...
ငါဖောက်ခိုင်းတာကွ။ ဘယ်သူဘာပြောချင်လဲ။ စောက်ဂရုမစိုက်ဘူး။ :)
စစ်အစိုးရရဲ့လှည့်ကွက်တွေမှာ လူတွေစတေးရ အုံးမှာပါ။ ဒါဟာ အကြောင်းရှာချက်တစ်ခု အဖြစ် လုပ်လိုက်တာပါ ။ပြီးရင် လက်ညှိုးထိုးပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများ လို့ခေါင်းစဉ်တပ်မှာပါ။
ဘာမှ သိဝူး . ဘာလို့ ဖြစ်မှန်းလဲ မသိဝူး .
ဘာကြောင့်လဲ မသိဝူး . ဘယ်သူခွဲတာ လဲ မသိဝူး .
ဘာမှ ကို မသိဝူး . သိချင်ရင် အဖမ်းခံလိုက်. အဟီ...
သွေးထွက်သံယို ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် မကောင်းပါဘူး။ အခုလို အခါကြီးရက်ကြီးမှာဖြစ်တာပိုမကောင်းပါဘူး။ အခုလိုလုပ်သွားတဲ့လူက တစ်ကယ်ကိုလူစိတ်မရှိတဲ့သူပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေလိုပဲ လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေက ကြားထဲကနေ ကို့ထမင်းကိုစား ကို့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူတွေကို ဒုက္ခရောက်အောင် အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ဟိုပြောဒီပြောပြော ပြောပြီး မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ် ပြသနာတက်စေချင်နေကြတာပဲ။ သူတို့ဘာသာသူတို့ ဖြေရှင်းပါစေဗျာ အချိန်တန်ရင် ဘယ်သူ့လက်ချက်ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အခုလိုဟိုလူစွတ်စွဲ ဒီလူ့စွတ်စွဲနဲ့ အခြေအနေရှုပ်အောင်မလုပ်ချင်ကြစမ်းပါနဲ့။
နောက်ဆုံးရရှိသောသတင်းအရ သေဆုံးသူ (၃၀) ဦးဖြစ်ပြီ ဖောက်ခွဲသော အဖွဲ့အစည်းမှာ NCUM ( www.ncum.info) ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒီလို ဗုံးပေါက်တဲ့ နိုင်ငံဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ရေတွက်လို့ ရပါတယ်။ ဘယ်လို နိုင်ငံမျိုးတွေမှာ ဗုံးပေါက်တယ် ဆိုတာလည်း လူတကာ သိပါတယ်။
မင်းတို့ တွေ လူတွေ မှ ဟုတ်သေး ရဲ့ လား
ဘယ်သူလို့ ပဲ ပြောပြော တကယ် တမ်း အထိနာတာတော့ ငါ့ တို့ ပြည်သူတွေ ပဲ
နောက်ဆုံး တော့ လည်း..........လာပါလိမ့်မယ်..........ဟို အဖွဲ့.......ဒီအဖွဲ့ကလို့ .........
ဘာလို့များ လူတွေ ၀ဠ် ဆိုတာထည့်ထည့်ပြောနေလဲမသိဘာဘူး။ ကြုံရသလောက်တော့ ၀ဠ်က မျက်နှာလိုက်ပီးလည်တယ်ထင်တာပဲ။ ဗုံးဖောက်တဲ့မသာ ဒီစာမျက်နှာကိုဖတ်မိရင်တော့ကောင်းသား။ ဒါပေမဲ့.ဒီမှာ စာလုံးလေးတွေနဲ့ သတ္တိပြနေမဲ့အစား...ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ငါဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြဖို့..အပြင်ထွက်ရပ်ဖို့အချိန်တန်ပီဗျို့...
so said we r people :(
Why must do this?I know someone is behind this and he is extremely notorious.Everyone knows him!!!!!!!Bitch
ရန်ကုန်မြို့ ထဲကို ဒီလက်နက်ျေတွ သယ်လာတာမသိဘူးလား။
ပြည်သူတွေထဲမှာ ဖောက်တဲ့ကောင်ကို လည်း ရှုတ်ချတယ်။
ဒီကောင်တွေလုပ်တာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် အင်းလျားလမ်းထဲ ကနေ ကန်တော်ကြိးဘက်ကိုရျွေးလိုက်တာပဲ ။ သိသာပါတယ်။
ဒီကောငတွေလုပ်တာပါပဲ။ ဘယ်ကောင်လဲ စစ်အစိုးရဘက်က။ ဆဲတော့ ဘာဖြစ်လဲ။ မင်းက မင်းအဖေကြောင်းဘယ်လောက်သိလို့လဲ။
So clear who did it..
1) who has such explosive?
2) who control the security of our traditional festival?
3) Who only damaged becoz of the boom exploded?
Answer: Than Shwe and his fu*king sons has full responsibility..
Junta..go and suck...
သေချာ ဒီဗုံးဖေါက်တဲ့သူလဲ မိမှာ မဟုတ်ဘူး.. ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူခိုးက သူကြီးဖြစ်နေလို့ ..
တကယ်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ။ ဒီလိုဖေါက်ခွဲမှုတွေခဏခဏလုပ်ပြီး ၁၉၈၈ ကလိုတိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းလို့ မလွဲမရှောင်တာ အာဏာသိမ်းထားတယ်လို့ အသံကောင်းဟစ်အုံးမယ်။ ဒီလိုယုတ်မာတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို သာသနာသားတွေကို သတ်ရဲတဲ့လူတွေပဲလုပ်မှာ။ ဘယ်တော်လှန်ရေးတပ်မှ ယုတ်ညံ့တဲ့အကြံတွေမလုပ်ဖူး။ ငရဲကိုမကြောက်တဲ့သူတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်မှာ နိုင်ငံတော့အဘက်ဘက်က ခံနေရပီ :(
ဘယ်သူပဲလုပ်လုပ် အရေးမကြီးပါဘူး။ အပြစ်မဲ့ လူတွေကိုပဲ သနားမိတယ်။ အရင်တစ်ခါ ဗုံးပေါက်တုန်းက ကိုယ်က ရှော့ပင်းမော မှာ ရှော့ပင်းထွတ်နေတာလေ။ မျက်နှာကျက်တွေ ပြုတ်ကျလို့ ခေါင်းတောင် ပေါက်သွားသေးတယ်။ အဲဒီ ကတဲက လူစည်တဲ့နေရာတွေ မသွားတော့တာ။
သေချာတယ်... ဒီဗုံးဖေါက်တဲ့သူလဲ မိမှာ မဟုတ်ဘူး.. ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူခိုးက သူကြီးဖြစ်နေလို့ ..
ခေါင်း သဲုး ပြီး တွေး ကြည်. ပေါ .......ဘယ် တုန်း က ကော အ မှန် ရှိ လို. လဲ
ရန် ကုန် ကို လာ လည် ဖို. တောင် ကား စီး ရ တာ နဲ နဲ အောက် ဆင်း လျှောက် ရ တာ များ များ တွေးကြည်. ကြ ပေါ........ ၀မ်း နည်း တာ တော. အ များ နည်း တူ ပဲ
အာဏာရူးအတိုက်အခံစောက်ရူးတွေရော လီးပဲကွာ။ ခွေးရူးနှစ်ကောင်ကိုက်တာကြားထဲကအပစ်မဲ့
မင်းတိုတွေအဲလို ပြောနေလိုလဲ သေတဲ့ သူတွေကော ဒဏ်ရာ ရတဲ့သူအတွက် ဘာမှမထူးလာဘူး သူတို အတွက် ၀ိုင်းပြီးဆုတောင်းပေးကြပါ လိုအပ်တာကူညီပေးကြပါ ဒါမှကူညီရာရောက်မယ် ဆဲနေလို လား အကျိုး မထူးပါဘူး။
People don't know how to set up or make it.... Only This Hell Goverment....
စိတ်မကောင်း ဖြစ်စရာပါ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာ မှာရန်သူ့မိုင်းထိရတဲ့ သွေးသောက်ယောင်းရင်း တွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်
ရတဲ့အခါ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးအတွက် ဆိုပြီး သူတို့အတွက် ဂုဏ်ယူဖြေသိမ့်ပေးလို့ရပေမယ့် ခုဟာကတော့ ရုပ်မာလွန်းပါတယ်....အာဇာနည်မွေးတာတွေ သတ်တာတွေ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး လှည့်ကွပ်တွေက ရိုးသွားပါပြီ...ခင်ဗျားတို့(ဗုံးဖေါက်သူများ) တကယ်သတ္တိ ရှိရင် မဆိုင်တဲ့ သူတွေမနှစ်နာပါစေနဲ့
ယောက်ကျားချင်း စစ်သားချင်း ချရအောင် ..သတ္တိရှိရင် လာခဲ့စမ်းပါ ....ရုပ်မာရိုင်းစိုင်းတဲ့ကောင်တွေရာ....
သေ ချာ တာ ပေါ. အား လုံး လည်း သိ နေ ပါ တယ် .....အမြင်. မြတ် ဆုံး ကိုယ်. ဘာ သာ ရေး တောင် အ လေး မ ထား တာ ....အ ခု လည်း ကြောင်း ရှိ ပ
ဘယ် သူ တွေ ဘယ် အ ဖွဲ. တွေ ကို လက် ညှိုး ထိုး အုံး မ လဲ မ သိ ဘူး
လူမဆံတဲကောင် တွေ က ဘယ် သူ တွေ လဲ
ရှင်း နေ တာ ပဲ
100% sure.... This Goverment did it....
စစ်အစိုးရ...စစ်အစိုးရ..shame on စစ်အစိုးရ for bombing in Rangoon..
First of all, currently there is no legit government in Burma and so-called SPDC was formed byabunch of thugs after committing atrocities on innocent people who just want to have equal rights for all.
they have been committing atrocities before and will be done again...so watch out!!!!
The sad thing is, some people are still unable to see the truth in there.
မင်းလည်း ဘာမှပြောနေစရာ မလိုဘူး။
ဘယ်သူလုပ်တယ်ဆိုတာ လုပ်တဲ့သူတိုင် အသိဆုံးပဲ။
အေး.... ကိုယ့် အလှည့်ကျတော့ မနွဲ့ကြနဲ့ပေါ့ကွာ။ ကံကြမ္မာဆိုတာ တပတ်တော့ပြန်လည်မှာပါ။ မသေခင်အထိတော့ စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့။
ဒါဟာနိုင်ငံရေးလည့်ကွက်ဘဲ၊ ဒီနှစ်သင်္ကြန် မှာစည်ကားမယ် ဆိုသည့် နေပြည်တော်မှာ ပုံးမပေါက်ဘဲ၊ အရင်နှစ်လိုမစည်ကားတော့သည့် ရန်ကုန်မှာ ဗုန်းပေါက်တာ စရာဘဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ခံရတာကတော့ အပြစ်မဲ့သည့်ပြည်သူတွေပါဘဲ
အခုချက်ချင်းပဲ သွေးသွားလှူမယ်.. ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို သွားပြီ..
Kaung Myat Aung,
U said some people knew that the explosives materials could be easily found local market? Oversea Terrorists and the trained peoples like u knew how to make it?
I want to ask u "who are currently in Myanmar?"..
You all like trained peoples from f*cking Junta, right?
Fu*k u all, government..U all dare to kill the Buddhist Monks so it's no wonder that u all are happy to kill innocent public..
ko bar thar ko lote chin tar lote !..
Pyi Thu tway ko ma lote par nae` ....
Toun Pan par tal ..... :(
ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ အရမ်းရှင်းပါတယ် ပြီးရင် ဇာတ် အဖွဲ့ကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ် ဘယ်သူတွေဘယ်အဖွဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးပါ၊
သမိုင်းကြောင်းရှိပါတယ် ပြည်သူတွေက သိပါတယ်
Fu*k War Dogs..
U all dare to kill our beloved buddhist monks.
No wonder u all r happy to kill innocent public..
ခွန်မြလှိုင် ရန်ကုန်သကြဿငန် မဏဿဍာပ်တွေမှာ ရေမကစားဖူးဘူးလားလို့ တွေးမိလိုက်တယ်။ မဏဿဍာပ်အောက်မှာ ဘာမှ မထားတတ်ကြဘူး။ ထားလည်း ပျက်မှာပဲ။ သတင်းဌာနတွေကတောင် ကြေညာနေတာကိုဗျာ ဒုကဿခ။
သတင်းတက်တာ မြန်ပာတယ်။ မြန်ဆို ကျွန်တှော မတင်ခင်တောင် ကမဿဘာ့သတင်းတွေမှာ တက်နေပြီ။ ခင်ဗျား ရေးထားတဲ့ပုံက ဒီသတင်း တင်တဲ့လူတွေပဲ ဗုံးခွဲသလို ဖြစ်နေပြီ :(
မဏ္ဍပ်ဘေးနားက ဈေးသည်တွေနဲ့ ရေကစားသူတွေက ပေါက်ကွဲမှု ကျွမ်းကျင်သူ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ ကလေးကအစ သိပာတယ်။ မြန်မာ့ တပ်မတော်နဲ့ မှုခင်း ဌာနမှာ လက်နက် ကျွမ်းကျင်သူ မရှိလို့မမေးတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ မေးချိန်လည်း မရသလို မေးလည်း အဲဒီအချိန်မှာ ပြောမှာ မဟုတ်ပာဘူး။ ဒီလောက် မြင်နေရတာကို ဗုံးလား ဓာတ်ဆီပုံး ကွဲတာလား ဆိုတာကတော့ ဈေးသည်လောက်က ခွဲခြားတတ်ပာတယ်။
whoever explode this bomb they r really f***ing bastards....go to hell
Ba Si said...
Sayar Tut said...
Pu Swal Mi said...
Ma Thay Myin said...
to zin.... ဖာခေါင်း... မင်းထိနေလို့လား...မင်းအမေ မနက်ဖြန် ဖာခံ၇မယ်... သတိထား....
အပြစ်မဲ့ သေတဲ့ လူတွေ ကိုစဉ်းစား...
bomb ထောင်တဲ့ ကောင်းတွေ လီးပဲ... မင်းတို့ အမေ ဖာခံ၇မယ် နားလည်လား..
ဟိုကောင် နေပြည်တော်က ကောင်တွေ ရှင်းလား....
ကို မကျေနပ်တဲ့လူကိုဘဲ ထိရောက်စွာလုပ်ပါ.........
သေဆုံးသွားသူများနှင့် ဒဏ်ရာရသူအားလုံးအတွက် တကယ်ကို ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။
မလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်သင့်တဲ့အချိန်မှာ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ခဲ့ကြသူများအားလုံး တူညီသော အကျိုးကို ဘ၀ မကူးပဲ ပြန်လည်ခံစားရပါစေ။
ဒဏ်ရာရသူများအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးချင်ပါသည်။သွေးလိုအပ်မည်ဆိုပါက မည်သည့်နေရာတွင် လှူရမည်ကိုသိချင်ပါသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မကောင်းပါဘူး.အားလုံးပျော်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာမျိုးကြုံရတာ မြန်မာလူမျိုးအနေနဲ့ ရှက်စရာပါပဲ..
စစ်အစိုးရလောက် အပြစ်မဲ့လူတွေကို သတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း မြန်မာပြည်မှာ မရှိဘူး။ ရန်ကုန်မှာ ဗုံးခွဲသတ်တယ်၊ ကရင်ရွာတွေမှာ ဗုံးခွဲသတ်တယ်၊ ရှမ်းရွာတွေမှာ ဗုံးခွဲသတ်တယ်။ ဘုန်းကြီး၊ ကျောင်းသား၊ သီလရှင်၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ တောင်ယာစိုက်စားနေတဲ့ ကရင်၊ ရှမ်း အကုန်သတ်တယ်။ ဗုံးခွဲတိုင်း ဗုံးခွဲတိုင်း အစိုးရလုပ်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေသိတယ်။
ဒီအထဲမှာလည်း စစ်ခွေးတွေ အုံးအုံးကြွက်ကြွက် ဝင်ဟောင်နေကြပါလား..
ဘယ်သူဖောက်ဖောက် လူသတ်လက်နက်မှန်သမျှ မင်းတို့လက်အောက်မှာချည်းပါပဲကွာ.
မင်းတို့ဖအေတွေကိုဘယ်လောက် ကာကွယ် ကာကွယ်..
မင်းတို့ယုတ်တာ ငါတို့ အိမ်အောက်က ခွေးတောင်သိတယ်.. သူလည်း ထမင်းနပ်မမှန်တော့ဘူးလေ..